လေ့လာပါ gemology - ကျောက်ကပ်သင်တန်း - ရရှိနိုင်သည့်အသစ်ပြောင်းခြင်း 2021
သစ် : အွန်လိုင်းလေ့လာပါ gemology
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လမှ စ၍ မသွားနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအနေဖြင့်ကြီးမားသောဝယ်ယူမှုကြောင့်ယခုအွန်လိုင်းတွင်လေ့လာရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Zoom, Skype, WeChat, WhatsApp ကင်မရာပေါင်းစုံစနစ်ဖြင့်သင်ကြားရန် software အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းအခြားမည်သည့် software ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဝက်နေ့က (3 နာရီ)
အပြည့်အဝနေ့က (2 x ကို 3h =6နာရီ)
ဒြပ် & ကုသမှု
Gemology သည်ကျောက်မျက်ရတနာပစ္စည်းများဆိုင်ရာသိပ္ပံနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာသတ္တုဗေဒအဟောင်း၏အထူးဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေ့လာခြင်းကျောက်မျက်သည်ကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်ကျောက်မျက်ရတနာပစ္စည်းများအားလုံး၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္aspectsများကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။
သူတို့၏ဓာတု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် optical ဂုဏ်သတ္တိများ၊ ကျောက်မျက်ရတနာများတုပခြင်းနှင့်ဒြပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောနည်းစနစ်များ၊ ကျောက်မျက်ရတနာများဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာကျောက်မျက်ရတနာများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊
'ကျောက်မျက်ရတနာပစ္စည်း' ဟူသောဝေါဟာရသည်ဖြစ်နိုင်ချေအမြောက်အများကိုအကျုံးဝင်သည်။ ကျောက်မျက်ရတနာပစ္စည်းများအများစုသည်တွင်းထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်သော်လည်းလူ ၃၀၀၀ ခန့်မှသတ္တ ၀ ါများအနက်သတ္တ ၀ါ၇၀ ခန့် / ကျောက်တုံး ၅၀၀ ခန့်သာထိုကျောက်မျက်ရတနာဟုခေါ်သောအထူးအမျိုးအစားမှအရည်အချင်းများကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
များသောအားဖြင့်ဈေး၌တွေ့ရလေ့ရှိသောကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်မိတ်ဆက်ခြင်း။ ဤအစ, ကြိုတင်မဲသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူအဆင့်သင်တန်းထိုကဲ့သို့သောကျောက်မျက်များ၏အရေးကြီးသောရှုထောင့်အလေးပေး။
1 လူတစ်ဦး: 200 $
2 လူတစ်ဦးမှ 4: 120 $ / လူတစ်ဦးနှုန်း
5 သူတစ်ယောက် +: 100 $ / လူတစ်ဦးနှုန်း
1 လူတစ်ဦး: 400 $
2 လူတစ်ဦးမှ 4: 240 $ / လူတစ်ဦးနှုန်း
5 သူတစ်ယောက် +: 200 $ / လူတစ်ဦးနှုန်း
* စျေးနှုန်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘွတ်ကင်မှလူ၏နံပါတ်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည် * အနည်းဆုံးရက်သတ္တပတ်2ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဘွတ်ကင်များအတွက်။
ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းသူအတုများ၏ထောင်ချောက်ထဲမကျရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမည်နည်း။ သဘာဝရတနာများ, ဒြပ်, ကုသမှုကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ဘယ်လို? အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းကိုဘယ်လိုခန့်မှန်းရမလဲ။ သင်၏အတန်းစဉ်အတွင်းသင်၏မေးခွန်းများအားလုံးကိုသင်အဖြေရလိမ့်မည်
ကျောက်မျက်ရတနာ optical ဖြစ်ရပ်
ဖန်ခွက်ဖြည့် / ကျိုးအဆာ / Flux အနာရောဂါငြိမ်းစရာ
4C ၏စည်းမျဉ်း -
ပါမောက္ခဒေါက်တာမိုဟာမက်မိုဟာမက် TOLBA SAID သည်ကျောက်မျက်ဆိုင်ရာသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ၁ ရက် (၆ နာရီ) “ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ 15ပြီလ ၁၅ ရက်မှာကမ္ဘောဒီးယား Gemological Institute မှာကျောက်ကပ်အထူးလေ့လာမှုသင်တန်းကိုတက်ဖို့ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေ့ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ မစ္စတာဂျင်း - ဖိလစ်ဟာ ၆ နာရီလေ့လာနေစဉ်မှာသူကကျောက်မျက်ရတနာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တယ်။ ငါထင်တယ်ကမ္ဘောဒီးယား၏ Gemological Institute သည်ကျောက်မျက်ရတနာနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတပိုမိုရရှိရန်သင့်တော်သောနေရာဖြစ်သည်။ ”
မစ္စတာ SERGIO (အီတလီမှ) နှင့် Ms. WIRIYA (ထိုင်းနိုင်ငံ) သည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ နေ့ဝက် (၃ နာရီ) “ ဖိလစ်ပိုင်သည်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာအချက်အချာကျသောနေရာတွင်ပြသခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပ်သည် Siem စပါးရိတ်ရာကာလဖြစ်သည်။ Inoltre se volte” - မေလ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၅
မစ္စတာ CARL (အင်္ဂလန်မှ) နှင့် Ms. AGYNESS (တရုတ်မှ) သည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ၁ ရက် (၆ နာရီ) ဇူလိုင်လ 30, 2015
Mr.Toh Hock An (ထိုင်ဝမ်မှ) သည်ကျောက်ရောဂါကုသမှုသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ နေ့ဝက် (၃ နာရီ) သြဂုတ်လ 15, 2015
မဟာ Hanz Cua (ဖိလစ်ပိုင်မှ) သည်ကျောက်ရောဂါကုသမှုသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ နေ့ဝက် (၃ နာရီ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅
Ms. Ramya Ponnada နှင့်မစ္စတာ Krishna Kanth Ponnada (အိန္ဒိယမှ) သည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ နေ့ဝက် (၃ နာရီ) နိုဝင်ဘာ 12, 2015
Mr. Sonny Rodriguez နှင့် Ms. Tiffany Rodriguez (ဖိလစ်ပိုင်မှ) သည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ နေ့ဝက် (၃ နာရီ)“ အကယ်၍ လိုအပ်သောအာမခံချက်ရှိသောကျောက်မျက်ရတနာများကိုလိုအပ်ပါကဤနေရာတွင်သွားပါ။ ” - စျေးကွက်ဟောင်းတွင်ရောင်းချသောကျောက်မျက်ရတနာများနှင့် ပတ်သက်၍ အဖြေများကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေနေသည်။ ဤနေရာသည်ကျွန်ုပ်အထူးသဖြင့်ကျောက်မျက်၏စစ်မှန်မှုကိုသိရှိရန်လိုအပ်သောအချက်အလက်များအားလုံးကိုပေးသည်။ စျေးကွက်ရှိကျောက်မျက်ဆိုင်အများစုသည်သင့်အားအတုများကိုရောင်းလိမ့်မည်။
ငါ3နာရီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့စာရင်းသွင်းဒါကြောင့်ကျိန်းသေကျောက်မျက်ရတနာနှင့်ပတ်သက်။ ငါ့အသိပညာကိုတိုးချဲ့။ နောက်မှသူတို့ကကျွန်တော့်ကိုလက်မှတ်ပေးခဲ့တယ်၊ ဒါကတကယ့်ကိုထိုက်တန်တဲ့ ၃ နာရီပဲ။ မစ္စတာဂျင်းသည်ကျောက်မျက်ရတနာများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ်အားထက်သန်သည်။ သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ၊ သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင့်ဟိုတယ်မှာသူတို့က tuk-tuk ကိုရွေးချယ်လိမ့်မယ်။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုသင်သည်ကျောက်မျက်များကိုလေ့လာရန်စိတ်မ ၀ င်စားဘဲသူရောင်းချရန်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည့်ကျောက်မျက်များကိုကြည့်ပါ။
မစ္စတာ Thorstein နှင့် Mr. Widar (နော်ဝေမှ) သည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ နေ့ဝက် (၃ နာရီ) နိုဝင်ဘာ 16, 2015
Tom နှင့် Kristin (USA မှ)၊ Norma နှင့် Trevor (ကနေဒါမှ) သည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ 22, 2015
(ဘူလ်ဂေးရီးယားမှ) Konstantin နှင့် Silviya ။ နိုဝင်ဘာလ 28, 2015
မိုင်, ဇူလိုင်, Rosie, Tilly & Celeste (အင်္ဂလန်မှ) ။ ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2015
Lee Hui Yun (စင်္ကာပူမှ) ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2015
သြစတြေးလျမှ Annick & Maxim ။ ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2015
စံပယ်၊ ဘရုစ်နှင့်အယ်လန် (ဖိလစ်ပိုင်မှ) ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2015
အမ်း & မာရိ ဇန်နဝါရီလ 8, 2016
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မှအမေရိကန်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှမာ့ခ်နှင့်လီနီ ဇန်နဝါရီလ 10, 2016
အင်ဒိုနီးရှားကနေမစ္စရုသ, ဇန်နဝါရီလ 12, 2016
အမေရိကန်နိုင်ငံကနေမစ္စတာဂျက်ဖ်, ဇန်နဝါရီလ 13, 2016
ယူအက်စ်အေမှ Joshua & Michael ဇန်နဝါရီလ 20, 2016
ဟောင်ကောင်မှ Stephanie & Mason ဇန်နဝါရီလ 21, 2016
USA မှ Gary, Diane & Barb ဇန်နဝါရီလ 21, 2016
ရုရှားမှအန်နာ & ဒိုင်ယာနာ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 4, 2016
Sok heng, Pui San၊ မလေးရှားမှ Chiew Sum & Sing Kwan “ အံ့သြဖွယ်လည်ပတ်မှု - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးမျက်စိဖွင့်ပေးခြင်း” - လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁ နာရီသင်ခန်းစာကိုယူခဲ့ပြီး Jean ကမျှဝေထားသောဗဟုသုတများစွာကြောင့်နောက်ဆုံး၌အနည်းငယ်ပိုကြာနိုင်သည်။ ဂျင်းသည်ကျောက်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုရှင်းပြရုံသာမကဘဲကမ္ဘောဒီးယားအခြေအနေနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုအသက်ဝင်စေသည့်အတွက်အလွန်တော်သောသူဖြစ်သည်။ သင်အမှန်တကယ်ရတနာအမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်ရပြီး၊ မည်သည့်အရာသည်အမှန်တကယ်၊ မည်သည့်အရာဖြစ်သည်၊ မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားသိမြင်ရန်ကြိုးစားသည့်နေရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောသရုပ်ပြခန်းများဖြစ်သည်။ သင်ခန်းစာအပြီးတွင်အလွန်သင့်တင့်သောစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ရန်ဒေသခံကမ္ဘောဒီးယားကျောက်မျက်ရတနာများစွာကိုလည်းရွေးချယ်ထားသည်။ အများကြီးသင်ယူခဲ့ပြီးပျော်စရာများစွာရှိခဲ့ပြီးကောင်းမွန်သောကမ္ဘောဒီးယားကျောက်မျက်ရတနာနှင့်ကျောက်မျက်ရတနာကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်မှုအသစ်ဖြင့်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ - ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2016
ဂရိနိုင်ငံမှနီကိုလတ်၊ ခရစ္စတိုဆိုလပ်စနှင့် Despoina ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2016
မစ္စကက်သရင်း, စပိန်ကနေ gemology အတွက်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2016
ယူကေမှဂျပန်နှင့်ဝီလျံမှ Naho သည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2016
ဖိလိပ္ပုက, အင်္ဂလန်ကနေ gemology အတွက်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2016
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ Dorte & Dorthe မှ Knud-Erik သည်ကျောက်ရောဂါဗေဒသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2016
အမေရိကန်နိုင်ငံကနေမစ္စ Jerica, gemology အတွက်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ မတ်လ 4, 2016
ယူကရိန်းထံမှမစ္စလီနာ, gemology အတွက်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ ငါကမ္ဘောဒီးယားကျောက်ခဲများအကြောင်းပိုမိုသိရန်တက္ကသိုလ်သို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ place ည့်သည်များ၊ ides ည့်လမ်းညွှန်များ၊ ပညာရှင်များ၊ ဒီနေရာမှာကမ္ဘာကြီးကကျောက်ခဲတွေအားလုံးကိုမင်းတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ် သတင်းအချက်အလက်ရှင်းပါတယ်, လေထုအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လ ၁၄ ရက်တွင်ကောင်းမွန်သောသင်ခန်းစာအတွက် Philippe အားကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်
အင်္ဂလန်မှ Javier & Andrea သည်ကျောက်ရောဂါဗေဒသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ မတ်လ 24, 2016
Tanya, Sebastian & Scott သည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ၈ နှစ်အရွယ်သားလေးကိုသူကကျောက်မျက်တွေ၊ ကျောက်ခဲတွေနဲ့ကျောက်ခဲတွေကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်တစ်နာရီကြာသင်တန်းတက်ခဲ့တယ်။ Jeanne-Pierre သည်သတ်မှတ်ထားသောနာရီထက်များစွာပိုလွန်ခဲ့ပြီး gemmology ဘာသာရပ်အပေါ်အလွန်အမင်းဗဟုသုတနှင့်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သားသည်သင်တန်းကိုအလွန်နှစ်သက်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အထူးသဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုပြုလုပ်သည့်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်ရှိကျောက်မျက်အမျိုးမျိုးကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်နည်းတူကျွန်ုပ်တို့လည်းပျော်မွေ့ခဲ့ကြသည်။ သူဟာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် Praseolite ကျောက်တုံးများနှင့်အတူသွားရတာ ၀ မ်းသာပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ - မတ်လ 29, 2016
အင်္ဂလန်မှ Sangita & Daniel သည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည် ဧပြီလ 3, 2016
သြစတြေးလျမှ Hilary & Ian သည်ကျောက်ရောဂါဆိုင်ရာသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ဧပြီလ 4, 2016
ဖိလစ်ပိုင်မှမာရီယာနှင့်ဂျိုအာနာသည်ကျောက်ရောဂါဗေဒသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ နေ့တစ်ဝက်သင်တန်းကိုကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာဌာန၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအလွန်သိကောင်းစရာများခဲ့သည်! ဒီသင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာကျောက်မျက်တွေကိုအကဲဖြတ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ၁၀၀% ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိမယ်။ - Aprilပြီလ 100, 8
Gemology တွင်သင်တန်းတက်ပြီးနောက်အမေရိကန်မှ O'Malley မိသားစု။ ဧပြီလ 14, 2016
သြစတြေးလျမှ Silvester & Silvia သည်ကျောက်ရောဂါဆိုင်ရာသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ မေလ 12, 2016
ဂျပန်ကနေမစ္စ Akemi, gemology အတွက်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ မေလ 15, 2016
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ Julius, Marieflor, Sandrine, Coleen & Cedric တို့သည်ကျောက်မျက်ဆိုင်ရာသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ မေလ 29, 2016
မ။ ဖိလစ်ပိုင်မှ Luz နှင့်ဗြိတိန်မှ Gordon တို့သည်ကျောက်ရောဂါဗေဒသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ မေလ 31, 2016
ယူအက်စ်အေမှကေတီ၊ အက်ဒွပ်ဒို၊ ဂျနီဖာနှင့်ဂျက်ဖရီတို့သည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ဇြန္လ 16, 2016
ယူအက်စ်အေမှ Jamie & Ellie သည်ကျောက်ရောဂါဗေဒသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ 18, 2016
ပြင်သစ်မှ Pauline & Ronan သည်ကျောက်ရောဂါဗေဒသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ 1, 2016
ယူအက်စ်အေမှ Sue, Maureen & Bruce မှကျောက်မျက်ဆိုင်ရာသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ 11, 2016
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှအန်းနှင့်အိုလီဗီယာသည်ကျောက်မျက်ရောဂါဗေဒသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ 18, 2016
ယူအက်စ်မှမက်စ်ဟစ်တာသည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ 19, 2016
သြစတြေးလျမှ Carrie & Martijn သည်ကျောက်ရောဂါဆိုင်ရာသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ 20, 2016
ကက်သရင်း, သြစတြေးလျမှ, gemology အတွက်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ 8, 2016
USA မှ Allesha & Ross သည်ကျောက်ရောဂါဗေဒသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ 10, 2016
Mr.Thiery, ပြင်သစ်မှ, gemology အတွက် (30 နာရီ) တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်၏လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလ 26-30, 2016
အလီနှင့်ဂျိုးသည်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ 20, 2016
Lenny, ပြင်သစ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အငယ်ဆုံးကျောင်းသား, gemology အတွက်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ 21, 2016
ယူအက်စ်အေမှစတီဗင်နှင့်ဂျဲနီသည်ကျောက်ရောဂါဗေဒသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2016
အင်္ဂလန်မှ Fiona & Shah သည်ကျောက်မျက်ရောဂါဗေဒသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် 9, 2016
ဟောင်ကောင်မှ Aislinn & Dominiqueဒီဇင်ဘာလတွင် 12, 2016
ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဘွတ်ကင်များအတွက်။